မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): Ulead Video Editor ဆော့ဝဲသုံး၍ ရုပ်သံဗီဒီယို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်နည်း
Ulead Video Editor ဆော့ဝဲသုံး၍ ရုပ်သံဗီဒီယို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်နည်း
လွယ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ VCD သီချင်းတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ 
ကိုယ်ပိုင်စာသားတွေထပ်ထည့်ဖို့အသေးစိတ် တည်းဖြတ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ဆော့ဝဲပါ
ဒီမှာDownload ယူပါ Ulead Video Editor 11
ဒီမှာDownload ယူပါ Ulead Video Editor လုပ်နည်းစာအုပ်
Author Anonymous at 1:29:00 PM
Labels: Videoတည်းဖြတ်မှုပညာ, ရုပ်သံ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နည်းစာအုပ်
minzawoo u said...
ဒေါင်းလို့၇ပြီး setup လုပ်၇ပါတယ်။ ဖွင့်ပြီးသုံးမ၇ပါ။ဘာလိုနေပါလဲ?
the security information is invalid or has been modified. this program
will be terminated.ဆိုတဲ့ဟာပဲပေါ်နေပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်၇မယ်ကူညီပါအကို....thanks..
Win Min Aung said...